Toekarena - Ho tanterahina ny 21 ka hatramin’ny 24 May izao ny FEPA andiany faha 12
Publié février 24, 2020 par Book News
« Fambolena, fiompiana ary ny jono : fototry ny fampandrosoana maharitra an’i Madagasikara ». Io no lohahevitra mandritra ny FEPA andiany faha 12 atao eny amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahantena Mahamasina ny 21 ka hatramin’ny 24 May 2020.
Hetsika maro no hotontosaina mandritra ny FEPA faha 12
Ho tanterahina eny amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny faha 21 ka hatramin’ny 24 May izao ny foaran’ny fiompiana, ny jono ary ny fambolena (FEPA). Hetsika karakarain’ny Malagasy Professionnels de l’Elevage (MPE) ary eo ambany fiahian’ny ministeran’ny Fambolena, ny fiompiana ary ny jono.
Ankoatra ny fifanakalozana eo amin’ny mpisehatra isan-tsokajiny dia hisy ihany koa ny varotra fampirantihana maro, famelabelaran-kevitra arahana ady hevitra momban’ny fampandrosoana ny sehatry ny fambolena mandritra ny efatra andro hanatanterahana ny FEPA.
Ankoatra izay dia hisy ihany koa fiofanana sy ny torohevitra maimaim-poana karakaraina mandritra io foara io. Hisy ihany koa tolotr’asa momban’ny tontolo ambanivohitra ho an’ny tanora. Izany no ho atao dia mba ahafahn’ny MPE manamafy n fandraisany anjara amin’ny fanatanterahana Politika Ankapoben’ny Fanjakana (PGE).
Nampahafantatra ireo hetsika ho hatao mandritra ny FEPA faha 12 ny tompon’andraikitry ny hetsika. cc : Toria Dimbiniaina
Ahatratra 300 ireo handray anjara amin’ny FEPA 2020
Ahatratra 300 ireo mpisehatra amin’ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono handray anjara amin’ity FEPA andiany faha 21 ity. Misy amin’izy ireo mpamokatra,mpandray ny vokatra, mpanodina ny vokatra, mpanao asa tanana ary ireo rafitra hafa misehatra amin’ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, sy mpisehatra eo amin’ny lafin’ny tontolo iainana. Ankoatra izay dia handray anjara amin’ity hetsika ity ihany koa ireo sampan-daharaha mpikirakra vola.
Tsara ny manamarika fa mifanindry an-dalana amin’ny faha 25 taonan’ny MPE ity FEPA andiany faha 12 ity.